Israel oo dishay taliye sare oo ka tirsan Islamic Jihad
Guriga Bahaa Abu el-Atta
Ciidamada Israel ayaa Marinka Gaza ka fuliyey duqeyn lagu dilay taliye sare oo ka tirsan kooxda Islamic Jihad.
Bayaan kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Bahaa Abu el-Atta “uu mas’uul ka ahaa weeraro badan oo argagixiso iyo gantaallo lagu soo tuuray Israel bilihii dhowaa, islamarkaana uu damacsanaa inuu fuliyo weeraro kale.”
Islamic Jihad ayaa sheegtay in weerarka sidoo kale lagu dilay xaaska Bahaa Abu el-Atta, islamarkaana lagu dhaawacay caruurtiisa.
Kooxda ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarka. Sidoo kale Xamas ayaa sidaas oo kale ballan-qaaday, waxaana ay sheegtay in Israel “ay xambaari doonto dhammaan cawaaqibka iyo natiijada ka dhalata beegsashadan halista ah.”
Kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ay weerarka Israel uga jawaabayso gantaallo.
Militariga Israel ayaa sheegay in qiyaatsii 50 gantaal lagu soo tuuray islamarkaana habkeeda difaaca gantaalaha uu dhexda ka qabtay 20 ka mid ah. Dhowr qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen gantaalaha.
Dhinaca kale warbaahinta Syria ayaa sheegtay in Israel ay duqeyn la beegsatay guri ku yaalla magaalada Dimishiq, oo uu degan yahay taliye kale oo ka tirsan Islamic Jiahad.